Network Marketing Atụmatụ Nke nwere ike melite gị Business | Gịnị Bụ Network Marketing
Ihe na Mee 2, 2021
MLM bụ ike mgbe ị na-aghọta na usoro. Mgbe ị na-eso ndị a Atụmatụ, ị ga-enwe ezi nkwado maka ihe mgbaru ọsọ gị na MLM.
Ọ bụrụ na ị kpebiri malite n'elu a multi-larịị oziịchụnta ahịa, ọ dị mkpa ka a tụlee n'ozuzu ụgwọ ngwugwu na dị ka ị na onye mgbe i partnered ma ọ teamed na. Naanị ma ọ bụrụ na ị maara otú ị na-akwụ ụgwọ nwere ike na ị chọpụta na ọ bụrụ na mgbalị ị na-etinye pụta bụ uru ọ.
Network ahịa dị ka a egwuregwu ebe ị na-agbalị ka mpi ịbanye ọtụtụ ndị. Gbalịa na-elekwasị anya n'ihe ndị dị mma mmetụta i nwere ike inwe on ndị mmadụ na-eji nke a dị ka gị n'elu ikpo okwu.
The ụzọ kasị mma mma gị na obibia bụ site mmụta si mejọrọ n'oge gara aga. Dee ebe ị dara na, na-aghọta ihe mere na ọ mere. Ị n'ezie nanị ịmụta site na-eme emehie mgbe ukpụhọde gị azum ya. Mụọ gị ọdịda aka izere ime otu ihe ahụ emehie ugboro abụọ.
Ọ bụrụ na gị ngwaahịa bụ ihe pụrụ iche, ọ pụrụ garner a ukwuu nke mmasị. Ndị mmadụ ga-ahọrọ ihe ha chọrọ, ma ọ bụrụ na ị na-enye ha a ọma ọzọ ha ga-bulie ihe ọ bụla ọ bụ na ị ga na-enye.
Inwe ihe e-mail ndepụta, na iji ya na-anọgide bụ akụkụ bụ isi nke ọma na netwọk ahịa. A nnukwu email ndepụta dị mkpa, ma ọ chịkọtara onwe gị ma ọ bụ zụrụ site na a ọrụ.
Inwe onye na-asọpụrụ na multi-larịị ahịa. Kwurịta na-abịa na ọhụrụ na echiche maka gị ụlọ ọrụ. Nke a arọ okporo ụzọ a ọma obibia ga-eme ka i nwere ike mmenyenjo gị mpi na ụfọdụ ka ha ejije gị style. Nwee a ndú na iji ọhụrụ obibia ka gị onwe gị ohere ke ahịa.
Nzọụkwụ mbụ bụ na-arụ ọrụ a mmefu ego na a kwa ọnwa ndabere. Ị mkpa iji chepụta ego ole ị nwere ike n'enweghị ego na-etinye n'ime a azụmahịa iji jide n'aka na ọ na-agba were were. Cheta na i nwere ike skimp na mmefu ego irite uru ma ọ bụrụ na ị dị adịghị nwere ya na-amalite na.
Chee echiche banyere ebe gị ahịa na-eme site ihe Outsourced ụlọ ọrụ. Ị nwere ike nweta ihe ọmụma, manpower ma ọ bụ ndị ọzọ ihe onwunwe dị mkpa iji na-enweta ọtụtụ ihe na multi-larịị ahịa. Iko ugbo si ụfọdụ ọrụ na-ahapụ gị na-elekwasị anya na ihe ndị dị mkpa, ahapụ outsourcing ike na-eme ihe ha na-eme ihe kasị mma.
Chee echiche banyere otú a mmefu ego bụ oké egwu gị bịa netwọk ahịa plan. Ma ọ bụghị ya, i nwere ike n'elu-okodu na-agba ọsọ nke ego maka onye na-akpa, ma ọ bụ na-eleghara anya na-eji iji ọma akwalite azụmahịa gị. Mgbe ị na-enwe ezi mmefu ego atụmatụ, ị ga-enwe ike ịhụ nnukwu ego picture na atụmatụ ya.
Mkpa nke ndị ahịa na-a kacha MLM. Ahịa afọ ojuju na-na-jikọrọ ịga nke ọma nke azụmahịa gị. Ihe mgbaru ọsọ gị kwesịrị ịbụ iji na-eji ihe dị ka 80 percent nke oge na-ege ntị na 20 percent nke oge okwu.
Na ihe ọ bụla chioma, i nwere ike na-eche ihe obi ike banyere uru ahịa mgbalị. Buru n'uche na i nwere ike mgbe niile na-amụta ihe banyere dọba ahịa, nke mere na ị nwere ike ịga nke ọma.
Categories: Iwuli Gị Team
Tags: larịị ahịa, netwọk ahịa
« Olee otú Iji merie Market Iji Gị Network